I-Kestrel Cottage - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguDavid
Kumda wehlathi lasebukhosini laseDean kwilali enobuhlobo eneendawo zokupapasha ezimbini ezinkulu kunye neHlathi likaloliwe weDean, iindlela ezininzi zokuhamba kunye neebhayisekile, kufutshane nemilambo yaseSevern kunye neWye. Idolophu ekufutshane iLydney enorhwebo kunye neenkonzo zalapha ekhaya.
Kufuphi nohambo oluninzi olunoxolo kunye neendledlana zebhayisekile Ihlathi lasebukhosini le-dean lilungele ikhefu lokuphumla okanye ungathanda ukutyelela iindawo ezininzi ezinomtsalane zalapha ekhaya njenge "hamba inkawu" iSymonds Yat rock, intlambo yomlambo iWye yokukhwela iphenyane okanye ukunyuka kwamatye ukusuka kwipropathi yam. Ungawubona umzila kaloliwe weDean xa usendleleni eya eParkend okanye eLydney. Ilali inee-pubs ezimbini ezibonelela ngokutya okulungileyo ii-ales kunye neecider
4.98 · Izimvo eziyi-104
IWhitecroft yilali ezolileyo ekufutshane nedolophu yaseLydney enazo zonke izinto eziqhelekileyo, iindawo ezininzi zokutyela ezilungileyo kunye nezinto ezithathwayo, iidolophu zaseCinderford Coleford naseMonmouth zikufuphi.
Ndiyafumaneka kubafowunelwa nge-imeyile, umbhalo kunye nefowuni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Whitecroft